လာထား … အာဘွား (စ ၊ဆုံး) – Grab Love Story
အသံလွင်လွင်လေးကြောင့် ယာလက်စ ကွမ်းယာကို ချ၍ ထွေးကြည်မော့ကြည့်လိုက်မိသည်။ ပါးဖောင်းဖောင်းလေးနှင့် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ကောင်မလေးတစ်ယောက် ၊ ပါးနှစ်ဖက်ပေါ်တွင် ပါးကွက်လေးကိုရေးရေးလေး တင်ထားသည်။ သူမလှမ်းပေးနေသော ငါးရာတန်တစ်ရွက်ကို လှမ်းယူရင်း နောက်ဖက်တွင်လည်း သူမနှင့် မတိမ်းမယိမ်း ကောင်မလေးတစ်ယောက် ပါရှိနေကြောင်း တွေ့လိုက်ရသည်။ သည်တစ်ယောက်ကတော့ အသားညိုစိမ့်စိမ့်ဖြင့် ကျစ်ဆံမြီးလေး နှစ်ချောင်းချထားသည်။ ကလေးမလေးနှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါကက်အစ ဘာမှပြောစရာမလို..။ ရွက်ကြမ်းရေကျို ဆိုတာထက်သာပြီး လှတယ်လို့ ပြောနိုင်ကြသူများ ဖြစ်သည်။
“ ဟဲ့..အိ…ကိုတုတ်ကြီးက သူ့အတွက် ကွမ်းယာတစ်ရာဘိုး မှာလိုက်သေးတယ်လေ..”
“ အေး…ဟုတ်သားဘဲ… ငါမေ့တော့မလို့….အစ်မ..ကိုတုတ်ကြီးအတွက် ကွမ်းယာ တစ်ရာဘိုး ယာပေးပါအုံး…”
ထွေးကြည် လက်ထဲမှ ငါးရာတန်ကို ကွမ်းယာခုံအံဆွဲထဲ ပစ်ထည့်ပြီး ကွမ်းရွက်ကိုဆွဲကာ ထုံးသုတ်ပြီး ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကို ပြုံးပြလိုက်သေးသည်။
“ ညီမတို့က .. ကိုချိုကြီး ဆိုင်ကလား…”
“ ညီမတို့က ညီအစ်မလား… အရင်က မတွေ့ဖူးပါဘူး…”
“ မဟုတ်ဘူး…အစ်မ…တစ်လမ်းထဲသူငယ်ချင်းတွေ…ဒီမှာအလုပ်ဝင်တာ သုံးရက်ပဲ ရှိသေးတယ်…”
“ အော်…အေးအေး…ရော့…ကိုတုတ်ကြီးအတွက် ကွမ်း…ဒီမှာ ငွေနှစ်ရာ…”
ထွေးကြည်က ကွမ်းထုတ်နှင့်အတူ ပြန်အမ်းငွေ နှစ်ရာကိုပါ သူမ၏အမေးကို ဒိုင်ခံဖြေနေသော အသားဖြူဖြူနှင့် အိ ဆိုသော ကောင်မလေးကို ပေးလိုက်၏။
“ နောင်လဲ လာဝယ်နော်…”
ဆိုင်ရှေ့မှ လှည့်ထွက်သွားသော ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကို ကြည့်ရင်း ထွေးကြည်တစ်ယောက် သက်ပြင်တစ်ချက် ချမိသည်။
“ ကိုချိုကြီးတို့များ…သူ့ဆိုင်မှာ အရောင်းစာရေးမဆို ချောချောလေးတွေဘဲ ခန့်ထားတာချည့်ပဲ…”
တွေးရင်း နှုတ်ခမ်းမဲ့မိသော ထွေးကြည်တစ်ယောက် ထပ်မံ၍ သက်ပြင်းချမိပြန်သည်။ အရင်ကောင်မလေးနှစ်ယောက်တုန်းကလည်း တစ်လပင်မကြာ ၊ အလုပ်က ထွက်သွားကြသည်။ ကိုတုတ်ကြီးကို ထွေးကြည် စပ်စုကြည့်တော့ ယောင်ဝါးဝါးသာ ပြောသည်။ သူလည်း သိပုံမရ..။ ဒါမှမဟုတ် မပြောချင်လို့လား မသိ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီတစ်ခါတော့ သတိထား၍ စောင့်ကြည့်ရမည်ဟု စပ်စုတတ်သော ထွေးကြည် စဉ်းစားမိသည်။
ထွေးကြည်က သာကေတ (၇) ဈေးနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင် ကွမ်းယာဆိုင်ထွက်သူဖြစ်သည်။ ဆိုင်တွင် အချဉ်ထုပ် မုန့်ထုပ် ဆေးလိပ် အကုန်ရောင်းသည်။ ထွေးကြည်၏ဆိုင်က ကိုချြိုကီး၏ကုန်စုံဆိုင်ရှေ့ လမ်းဘေးတွင်ရှိသည်။ ကိုချိုကြီးဆိုတာက အသက်(၃၅)နှစ်လောက်ရှိသော လူပျိုကြီးဖြစ်ပြီး သူ၏ဆိုင်တွင် ကိုချိုကြီးက သူနှင့်ဆွေမျိုးမကင်းသော အသက်(၄၀)လောက်ရှိသည့် ကတိုတ်ကြီးဆိုသူကို ကူဖော်လောင်ဖက်၊ ဆိုင်စောင့်အဖြစ် ခေါ်ထားသည်။ ထွေးကြည်က နေတော့ (၈)ရပ်ကွက်ထဲတွင်ဖြစ်ပြီး ည (၈)နာရီလောက် ဆိုင်သိမ်းလျှင် သူမ၏ပစ္စည်းများအား ကိုချိုကြီးဆိုင်ထဲတွင် သိမ်းခဲ့သည်။ ပြီးတော့ အပေါ့အလေးသွားတာကအစ အိမ်အတွက်ပစ္စည်းဝယ်တာအဆုံး ကိုချိုကြီးဆိုင်တွင်သာ ဖြစ်သည်။
ထွေးကြည်က အသက် (၃၀) ရှိပြီး ကလေးတစ်ယောက် အမေဖြစ်ပြီး ယောက်ျားက ဘာမှအားမကိုးရ။ မိုးလင်းက မိုးချုပ် မူးနေတတ်သည်။ ကလေးက ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီး အသက်လေးနှစ်ရှိပြီဖြစ်ကာ ထွေးကြည်က သူမအမေအိမ်သို့ ပို့ထားသည်။ (၇)ဈေး ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတွင် ထွေးကြည်ဆိုလျှင် မသိသူမရှိသလောက် ဖြစ်သည်။ စွာလို့မဟုတ်ပါ..။ ဒီနေရာတွင် ဈေးရောင်းသည်ကလည်း အိမ်ထောင်ကျစကထဲက ဆိုတော့ ငါးနှစ်လောက်ရှိပြီ.။ နောက်ပြီး ထွေးကြည်က အိမ်ထောင်သည်ကလေးတစ်ယောက်အမေဆိုပေမယ့် တောင့်တောင့်တင်းတင်းနှင့် အစွင့်အကား အမို့အမောက် များ တင်းရင်းကာ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေဆေးငါးကြီးလိုမျိုး ဖြစ်သည်။ ထွေးကြည်ပြုံးလိုက်လျှင် ပါးချိုင့်လေးနှစ်ဖက်က အထင်းသားနှင့် ချစ်စရာ ထွေးကြည်ပါ…။ ဒါပေမယ့် ထွေးကြည်တွင် မကောင်းသောအကျင့်တစ်ခုရှိသည်။ မိန်းမတော်တော်များများသည် အနည်းနှင့်အများ စပ်စုတတ်ကြသည်ဖြစ်ပေမယ့် ထွေးကြည်ကတော့ စပ်စုရမည်ဆိုလျှင် ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ ၊ ဆိုင်ကိုမေ့၍ စပ်စုတတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ ဟဲ့….မိမာ…ကိုချိုကြီးက နင့်ကို ခိုးခိုးကြည့်နေတယ်…”
အိ …၏ အသံက တိုးတိုးလေး..။ ပြီးတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းစားပွဲတွင် စာရင်းလုပ်နေသော ကိုချိုကြီးထံသို့လည်း မျက်လုံးကဝေ့၍ကြည့်လိုက်သေးသည်..။
“ အံမယ်…နော်…နင့်ကို ကြည့်တာပါဟာ…အိရာ….”
“ ဟိ..ဟိ…မဆိုးဘူးနော်… တိုက်နဲ့ကားနဲ့ နောက်ဆက်တွဲကလည်း သူ့အမေနဲ့ သူ့တူလေးတစ်ယောက်ပဲ ရှိတာ… ..ဟိ….”
“ တော်စမ်းပါ..အိရာ… သူ မိန်းမပွေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းပြောနေကြတာဥစ္စာ.. ကဲပါ.. ငါ အမေမှာတဲ့ ဟင်းချက်စရာတွေဝယ်ဖို့ ဈေးထဲသွားလိုက်ဦးမယ်..၊ ကိုတတ်ုကြီးလည်း အပြင်သွားတော့ ဒီမှာနေခဲ့ဦး..”
“ ဘာ… ဒီမှာ ..ငါတစ်ယောက်ထဲလား…”
“ အေးလေ.. ဟိုမှာ ကိုချိုကြီး ရှိတာဘဲဟာ…”
“ ကျွတ်…ဒုက္ခပါဘဲ… ကိုတုတ်ကြီးကလည်း အရေးထဲ ဘယ်ထွက်သွားမှန်း မသိဘူး…ဟင်း…”
မျက်စိမျက်နှာပျက်သွားသော အိ ကိုကြည့်ရင်း အမာ ပြုံးလိုက်သည်။
“ ညည်းဘဲ စောစောကပြောတော့…..”
“ ရှူး…တော်တော့..ကိုတုတ်ကြီးပြန်လာတော့မှ နှစ်ယောက်အတူတူ သွားကြရအောင်လား..အမာရယ်…”
အိ တကယ်ကို ကြောင့်ကြစွာ ပြောနေကြောင်း အမာ သိသည်။ ဆိုင်တွင် ဘယ်သူမှ ရောင်းမည့်သူ မရှိဘဲ နှစ်ယောက်လုံးထွက်သွားလို့ကလည်း မဖြစ်သေး..။
“ ကဲပါ အိရယ်…. ခုံတစ်လုံးယူပြီး ဆိုင်ရှေ့နားမှာ ထွက်ထိုင်နေလိုက်ဟာ…ဟိုမှာ ဈေးက တော်တော်ကွဲနေပြီ.. ဟ ၊ ငါက စောင့်လို့မရတော့လို့ပါဟာ…ကဲ…ငါသွားပြီ…”
ပြောပြောဆိုဆို အမာက ထွက်သွားတော့ အိ က ချက်ချင်းပင် ထရပ်လိုက်ပြီး သူမထိုင်နေသော ကော်ခုံလေးကို မကာ ဆိုင်ရှေ့ထွက်ရန် ပြင်လိုက်သည်။
“ အိအိရေ… ဒီမှာ ပီနံအိတ်ခွံတွေ သိမ်းရအောင်…”
ကိုချိုကြီး၏ အသံကြားကြားချင်း ရင်ထဲဒိန်းခနဲ ဖြစ်သွားရကာ အိ တစ်ယောက် အယောင်ယောင်အမှားမှား ဖြင့် လက်တစ်ဖက်က ကော်ခုံလေးကို ကိုင်၍ ကိုချိုကြီးရှိရာသို့ လှမ်းလာခဲ့သည်။ ပြီးမှ သတိရပြီး လက်ထဲမှ ခုံကို ချထားခဲ့ရသည်။ ပီနံအိတ်ခွံတွေ ပုံထားသော နေရာသို့ ရောက်သောအခါ အိ ကရပ်လကိုသည်။
“ အိတ်တွေကို အလုံး ၃၀ စီထပ်ပြီး လိပ်လိုက်၊ ပြီးရင် အိတ်ခွံတစ်လုံးထဲကို ထည့်ကြမယ်…”
ပြောရင်း ကိုချိုကြီးက အိအိ အနား ရောက်လာသည်။ အိ တစ်ယောက် အိတ်ခွံများကို ရေ၍ ထပ်နိုင်ရန် ဆောင့်ကြောင့်လေး ထိုင်ဖို့ပြင်လိုက်သည်။
“ ဟိုဖက်မှာလဲ အိတ်တွေ ကျန်သေးတယ်…”
အိ က ကုန်းကုန်းကွကွနှင့် ထိုင်ဖို့အလုပ် ကိုချိုကြီးက စကားပြောရင်း အိ နောက်ကဖြတ်၍အထွက် ခပ်ကုန်းကုန်းလေးဖြစ်နေသဖြင့် နောက်သို့ရောက်နေသော အိ ထဘီထဲမှ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကိုချြိုကီး၏ ပုဆိုးတွင်းမှ ထောင်မတ်နေသော လီးကြီးက ဆတ်ခနဲ ခပ်နာနာလေး ထိုးထောက်မိသွားသည်။ အိ တစက်ိုယ်လုံး တုန်သွားပြီး မျက်နှာလေးတစ်ခုလုံး နီရဲသွားသည်။ မြန်မြန်ပြီး ပြီးရော သဘောဖြင့် အိတ်ခွံများကို ထပ်၍လိပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ အိတ်ခွံအလွတ်တစ်လုံးထဲ ထိုးထည့်သည်။ တစ်ယောက်ထဲ လုပ်၍မလွယ်..။ အိတ်ခွံလိပ်က ပြေကျသွားသည်။
ကိုချိုကြီး အိ အနားသို့ ရောက်လာသည်။
“ ကဲ…ရော့ နင် ကိုင်ထား…”
အိက ပီနံအိတ်ခွံကို ကိုင်၍ အဝကိုဖြဲပေးသည်။ ကိုချိုကြီးက အိတ်ခွံအလုံး ၃၀ ထပ်၍ လိပ်ထားသော အလိပ်ကို မလိုက်သည်။
“ ပီနံအိတ်ခွံကို ပြောတာ…”
ပြောလိုက်သော ကိုချြိုကီးက အိ ရဲ့ ရွှေရင်မို့မို့မောက်မောက်ကို ပြောင်ကြည့်၍ပြောသည်။ တုန်တုန်ယင်ယင်ဖြစ်နေသော အိ ဒေါသနည်းနည်း ထွက်သွားသည်။
“ ဖြဲထားတာဘဲ ဥစ္စာ… မဝင်တာတော့ မတတ်နိုင်ဘူး….”
အိ ကိုင်ထားသော အိတ်ခွံလွတ်ထဲသို့ ကိုချိုကြီးက အိတ်ခွံလွတ်အလိပ်ကြီးကို ထောင်ပြီး ထည့်သည်။ နှုတ်ခမ်းတစ်ဖက် တစ်ပြီး ခံနေသည်။ အိတ်လိပ်ကလည်း မဝင် ၊ မြန်မြန်ပြီးချင်နေသော အိတစ်ယောက် စိတ်တိုနေပြီ..။
“ ငါ့ဟာကြီးက ပွပြီး ကြီးနေလို့ ထင်တယ်…”
“ ပီနံအိတ်လိပ်ကြီးက ပွနေတယ်… ကဲ..ထပ်ပြီး ပေါင်ဖြဲပေး…ဟာ…ဟို…အိတ်ကိုဖြဲပေး…”
အိ ကိုချိုကြီးကို မျက်လုံးတစ်ချက်လှန်ကြည့်လိုက်ပေမယ့် ဘာမှမပြောတော့..။ ကတုန်ကယင် ဖြစ်နေသည့်ကြားက ကိုချိုကြီးများ ဒီလိုစကားမျိုး ဘာများထပ်ပြောအုံးမလဲဟု ငံ့လင့်မိသည်။ သူမကိုယ်သူမလည်း အံ့သြမိသည်။
“ ကဲ…အစွမ်းကုန်သာ ဖြဲထားတော့ ဆောင့်ပြီး ထည့်လိုက်တော့မယ်….”
“ အင်း…ဝင်သွားပြီ… အာ…အရမ်းဘဲ မကောင်းဘူး….”
“ ဘာလဲဟ…အခုပြီးသွားပြီ မဟုတ်လား…”
“ ပြီးတောြ့ပီးတာပေါ့..ဒါပေမယ့် အရမ်းဆောင့်တာကို…ဒီမှာ အောင့်သွားတာပဲ…မကောင်းဘူး…”
ချစ်စဖွယ် မျက်စောင်းလေးထိုး၍ ပြောလိုက်သော အိ အား ကိုချြိုကီးက ပြုံးဖြဲဖြဲနှင့် စိုက်ကြည့်သည်။
“ အစမို့ပါ… နောက်တော့ ကောင်းလွန်းလို့မှ…..”
ကိုချိုကြီး စကားမဆုံးမီ အိ လှည့်ထွက်ခဲ့သည်။ အိ ကော်ခုံလေးယူပြီး ထိုင်နေကျနေရာသို့အရောက် လူတစ်ရပ်ကျော် မြင့်သော ဆန်အိတ်ပ၏ုံ ရှေ့ဖက်မှပတ်၍ ဝင်လာသော အမာကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် ကော်ခုံကို ချပြီးထိုင်လိုက်သည်။ အမာက ခုမှ ရောက်လာသည်မဟုတ်..။ ကိုချိုကြီး၏ ..ကဲ အစွမ်းကုန်ဖြဲထား ဆိုသော စကားအစတွင် တစ်ဖက်ဆန်အိတ်ပုံဘေးသို့ ရောက်နေပြီးသား..။ အမာ ရင်တွေတုန်သွားသည်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကို တစ်ယောက်တည်း ထားခဲ့မိတာ မှားများ သွားပြီလားဟု တွေးရင်း ဆက်ပြောသော စကားတွေကို ကြားရတော့ အမာ့စိတ်ထဲတွင် တစ်စုံတစ်ရာကို ခံစားလာရသည်။ ဆန်အိတ်များ ကွယ်နေသဖြင့် ဘာမှ မမြင်ရ။ ဒါပေမယ့် သေတော့သေချာသည်။ ဟော ပြီးသွားပြီတဲ့..၊ ခုတင် ဝင်တယ် ခုဘဲပြီးတယ်…။ အိ တော်တော် ထန်တာဘဲ…၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့ဟာကြီးကဘဲ စွမ်းလွန်းလို့လား..၊ အတွေးပေါင်းစုံဖြင့် အမာတစ်ယောက် စိတ်တွေ ဂယောက်ဂယက်ဖြစ်လာပြီး သူတို့ရှိရာသို့ ပြေးဝင်သွားချင်စိတ်တွေကို မနည်းထိန်းလိုက်ရသည် ။ ဟော…. အိ ပြန်ထွက်လာပြီ..။ အမာက အိကို အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့ သူမ၏မျက်နှာတစ်ခုလုံး နီရဲနေသည်။ ပြီးတော့ အမာ့ကိုပင် လှမ်းမကြည့် ..၊ သေချာပါပြီ..။ အမာက စောစောက သူတို့ရှိမည့်နေရာသို့ တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။
ပုဆိုးပြင်ဝတ်နေသော ကိုချိုကြီး၏ မျက်နှာက ပြုံးဖြဲဖြဲဖြင့် သူမကို မျက်လုံးတစ်ဖက် မှိတ်ပြသည်။ အမာတစ်ယောက် ဆောက်တည်ရာ မရချင်တော့…။
“ အိ… ပြန်ကြရအောင်….”
အင်းလိုက်ရင်း အိ ထိုင်နေရာမှ ထသည်။ အမာ၏ အကြည့်က အိထံသို့ စူးစမ်းလျှက် ..။ အို….အိ ထဘီနောက်မှာ အကွက်လိုက်ကြီး စွန်းထင်းနေပါလား…။ အမာတစ်ယောက် စိတ်နဲ့လူ နဲ့ မကပ်ချင်တော့..။
နှစ်လုံးကော်မရှင်နှင့်ရောင်းသော မစိန်အေးတစ်ယောက် သုတသ်ုတ်ပြာပြာဖြင့် ကိုချိုကြီး၏ဆိုင်ထဲသို့ ဝင်သွားသည်ကို ထွေးကြည်တွေ့လိုက်ရသည်။ ကွမ်းယာနေရင်း လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဆိုင်က ပိတ်ထားပြီ..။ တံခါးက ပျဉ်ချပ်တွေထောင်စီပြီး ပိတ်ရသည့်တံခါး..။ နောက်ဆုံး သော့ခတ်ပိတ်ရမည့် ပျဉ်တစ်ပြားသာ ပိတ်ဖို့ ကျန်သည်။ ထိုအပေါက်မှ စိန်အေးက မလုံမလဲဟန်ဖြင့် အပြင်သို့ တစ်ချက်ဝေ့ကြည့်ရင်း ဆိုင်ထဲသို့ ဝင်သွားသည်။ အချိန်က ည(၇)နာရီလောက်ရှိပြီ..။ စပ်စုတတ်သော ထွေးကြည် ကွမ်းယာရောင်းရတာ စိတ်မဖြောင့်တော့။
“ အောင်ကိုရေ… အောင်ကို… ဆိုင်ခဏလောက် လာထိုင်ပေးစမ်း”
“ လာမယ်… အမ…ခဏလေး….”
ဆိုက်ကားသမားလေး အောင်ကို ဂိတ်မဟုတ်သော်လည်း ညမိုးချုပ်ရင် ထွေးကြည်၏ဆိုင် မျက်စောင်းထိုး ခပ်လှမ်းလှမ်း လမ်းတစ်ဖက်တွင် ရပ်၍ခရီးသည်စောင့်တတ်သည်။ ဆိုက်ကားကို သော့ခတ်နေသော အောင်ကိုအား ကြည့်ရင်း ကြာလိုက်တာဟု ထွေးကြည် စိတ်လောနေ၏။ အောင်ကိုဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း ထွေးကြည် ဘာခိုင်းပါ့မလဲလို့ မျှော်နေတဲ့ကောင်။ ဆိုက်ကားကို သော့ခတ်ပြီးသည်နှင့် ထွေးကြည်၏ဆိုင်သို့ လမ်းကိုဖြတ်ကူးပြေးလာသည်။
“ ခွေးသား သေချင်လို့လား….”
ဘယ်တော့မှ နှေးနှေးမမောင်းတတ်တဲ့ ကားစပယ်ယာ၏ဆဲသံက ထွက်လာသည်။ အောင်ကို လှည့်၍ပင် မကြည့်။ ထွေးကြည်၏ဆိုင်ခုံနားရောက်တော့ ခုံပေါ်က အလျှင်စလိုဆင်းလိုက်သော ထွေးကြည်နှင့် လူလုံးချင်းတိုင်မိသည်။ တိုက်တာမှ အိကားနေသော ထွေးကြည်၏တင်ပါးကြီးနှင့် အောင်ကို၏ရှေ့ဖက်
မိမိရရကြီးပင်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ အောင်ကို တန်သွားပြီ..။
“ အောင်ကို…ဆိုင်ခဏကြည့်ထားပေးအုံး..၊ ငါ ဝမ်းနှုတ်ဆေး စားထားလို့…”
ပြောလည်းပြော ထွေးကြည်က ကိုချိုကြီး၏ဆိုင်ဘေးကပ်လျက် လမ်းကြားလေးထဲသို့ အပြေးတပိုင်းနှင့် ဝင်သွားသည်။ လမ်းမီး၊ ဆိုင်မီးရောင် ခပ်မှိန်မှိန်ကြားက ထွေးကြည်၏လှုပ်ခါသွားသော တင်သားကြီးတွေကို ငေးမောကြည့်ရင်း အောင်ကို သက်ပြင်းချလိုက်မိသည်။
အပြန်လမ်းတလျှောက်လုံး မာမာ၏စိတ်ထဲ မကျေမချမ်း ဖြစ်လာမိသည်။ ကြည့်..တစ်လမ်းလုံးလည်း အိက သူ့ကို ဘာစကားမှမပြော၊ ငေးငေးငိုင်ငိုင်ဖြင့် အသက်မပါသလို လမ်းလျှောက်လာသည်။ ကောင်မ…တော်တော်ကောင်းလာပုံရတယ်..၊ ငါ့တောင် စကားမပြောနိုင်ဘူး..။ ဒေါသစိတ်ဖြင့် မာမာတွေးလိုက်မိသည်။ အိကို မကျေနပ်သလို ကိုချိုကြီးကိုလည်း မကျေနပ်။ မိန်းခလေးနှစ်ယောက်ရှိတာ အိကိုမှ ရွေးရတယ်တဲ့လား..။ မခံချင်စိတ်က ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ပြောရရင် ငါကတောင် အိထက် ကိုယ်လုံးပိုလှသေးတယ်။ တင်သားရင်သားတွေ ဘာပဲယှဉ်ယှဉ် ငါကတောင် သာသေးတယ်။ ငါနဲ့ မတွေ့သေးလို့ပါ။ တွေ့လို့များတော့ ကိုချိုကြီး အိကို မေ့သွားရမယ်။ မာမာ..စိတ်ထဲမှ ကြိမ်းနေမိသည်။ အသက်၂၀ မပြည့်သေးသော်လည်း မာမာက ရည်းစား ၆ယောက်ထားခဲ့ပြီးပြီ။ ရည်းစား ၅ယောက်နဲ့က ရည်းစားမက နေခဲ့ပြီးပြီ။ စိတ်ကြိုက်မဟုတ်လို့ အားလုံးကို အဆက်ဖြတ်ခဲ့သည်။ အင်း…နေ့လည်က ကိုတုတ်ကြီးကို ကိုချိုကြီး ပြောတာကြားလိုက်သည်။ ဒီည ကိုတုတ်ကြီး အိမ်ပြန်ပြီး အိပ်၊ သူ အမြတ်ခွန်အတွက် စာရင်းတွေ လာလုပ်ရင်း ဆိုင်မှာ အိပ်မည်တဲ့..။ မာမာအိမ်ရောက်တော့ ရေချိုးအလှပြင် ၊ ထမင်းစားပြီးတော့ တစ်ခါ အလှပြင်ပြီး အမေ့ကို သူငယ်ချင်းအိမ်သို့ သွားမည်ပြောပြီး ဆိုင်ရှိရာသို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ မာမာတစ်ယောက် ရေမွှေးနံ့တသင်းသင်းနှင့် ပြင်ဆင်ထားတာလည်း ပျံလို့..။ ဝတ်စားထားတာလည်း ပါးပါးလေး…။ အင်း…လမ်းလျှောက်လာရင်း ရင်တော့ ခုန်မိသား..။ ဆိုင်ရှေ့ရောက်လျှင် ပျဉ်ပြားတစ်ချပ်ထဲ ဟထားတာကို တွေ့ရတော့ မာမာတစ်ယောက် ဘေးဘီကြည့်ကာ လှစ်ခနဲ အထဲသို့ ဝင်လိုက်တယ်။ ဒါကိုတွေ့လိုက်သည်က အောင်ကို..။ ကိုချိုကြီးဆိုင်က စာရေးမ အချိန်မတော်မှ ဆိုင်ထဲသို့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နှင့် ဝင်သွားသည်။ ပြီးတော့ ဒီကောင်မလေးကို နေ့တိုင်း အောင်ကို တွေ့နေကျ..။ ကောင်မလေး ဘာလုပ်မလို့လဲ..။ အောင်ကို ဖင်တကြွကြွ ဖြစ်လာသည်။ ချက်ချင်းတော့ ဝင်လိုက်သွားပြီး ချောင်းလို့မဖြစ်။ ခဏနေမှ ဝင်၍ချောင်းမည်ဟု အောင်ကို တွေးလိုက်သည်။ ဆိုင်ထဲတွင်တော့…
နှစ်လုံးကော်မရှင်နှင့်ရောင်းသော မစိန်အေး ဆန်အိတ်နှစ်လုံးပေါ်တွင် ကားယားကြီး ဖြဲထိုင်ကာ
ကိုတုတ်ကြီးက ဒူးထောက်လိုးနေသည်။ နီကျင့်ကျင့် မီးလုံးက ခပ်ဝေးဝေးတွင် ရှိနေပေမယ့် သဲသဲကွဲကွဲ မြင်နေရသည်။ မစိန်အေး၏စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဧရာမ ဖောင်းဖောင်းကြီး..။ ပင့်လှန်ထားသော ဘရာစီယာကြားက ထွက်ပေါ်နေသည့် နို့ကြီးတွေမှာလည်း ဖောင်းတင်း၍နေသည်။
လီးမဲမဲကြီးကို မစိန်အေးက ကိုင်၍သွင်းပေးရင်း ဘေးဘီကို ကြည့်သည်။ လူမိသွားမည်ကို စိုးရိမ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုတုတ်ကြီး၏ လီးမှာ မဲနက်နေပြီး အမွှေးတွေမှာထူထဲလှသည်။ လုံးပတ်ကြီးမှာ မြွေဟောက်ကြီးအလား ပြောင်တင်းနေသည်။ ဒစ်ကြီးက ပြဲလန်နေ၏။
“ မြန်မြန်လုပ်ပါ.. ကိုတုတ်ရဲ့…”
မစိန်အေး၏အသံမှာ သိသိသာသာကြီး တုန်ရင်လှိုက်မောနေသည်။ ကိုတုတ်ကြီးက ဖင်ကြီးကိုကြွလျက် လီးကိုဖိသွင်းရင်း တပြိုင်နက်တည်းမှာပင် စိန်အေး၏နို့ကြီးတွေကို ဆွဲလှန်ကာ စုပ်လေသည်။
လီးကြီးက လျှောခနဲ စူးစိုက်သွားသည်။ စိန်အေးက သူမ၏ခေါင်းကို နောက်သို့လှန်ချလိုက်သည်။ ပါးစပ်ကိုဟ၍ တအင်းအင်း ညည်းတွားရင်း ဖင်ကြီးကို စကောဝိုင်းလှုပ်ခါရမ်းပေးသည်။ ကိုတုတ်ကြီးကလည်း အဆက်မပြတ် ဆောင့်လိုးရင်း နို့ကြီးတွေကို စို့ပေးသည်။
စောက်ခေါင်းထဲမှာ အရည်များ ရွှဲနစ်နေပြီး လီးဝင်သွားတိုင်း အသံများထွက်ပေါ်လာသည်။ စိန်အေးက အိမ်ထောင်သည်ဆိုပေမယ့် ကလေးမမွေးဖူးသေး..။ ယောက်ျားက ကုန်ကားလိုက်သည်။ တစ်လမှာ တစ်ခါလောက် အိမ်ပြန်သည်။ အိမ်တွင်နှစ်ရက်လောက်နေပြီး ပြန်သွားသည်။ ဒီတော့ မစိန်အေးကလည်း ကယို့ဝမ်းနာကိုယ်သာသိဆိုသလို ငါ့ဝမ်းပူဆာ မနေသာတော့လည်း စိတ်မပါချင်ယောင်ဆောင်၍ စပယ်ယာလင်များ ရှာထားရသည်။ သူ့လင်ကြီးထက်တော့ အနည်းဆုံး အလုံးအရပ်တော့ သာမှာပေါ့။ ကိုတုတ်ကြီးက အတွေ့ကောင်းသည်။ လီးကြီးစောက်ခေါင်းထဲ ဝင်လာတိုင်း ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ခံ၍ကောင်းလှသည်။
“ ကော့နေတာပဲတော့…ကိုတုတ်ရဲ့.. ဒီမှာ သေတော့မယ်… အင်း..ဟင်း…ဟင့်…”
“ အား..အား…..ကောင်းလိုက်တာ စိန်အေးရယ်… အီး…..”
စိန်အေးက ကော့ထိုးလိုက်၊ စကောဝိုင်း ဝိုင်းပေးလိုက်ဖြင့် တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးနေသည်။ ကိုတုတ်ကြီးကလည်း ဒလကြမ်း ဆောင့်လိုးနေသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်လိုးနေသည်က ဆိုင၏်အတွင်းဘက်ကျကျတွင် ဆိုင်ရှေ့ဖက်နှင့် နောက်ဖက်ခြားထားသော လူတစ်ရပ်ကျော် ရှိုးကေ့စ်ကြီးကတစ်ဖက် အခြားတစ်ဖက်က မျက်နှာကြက်ထိလုလုဖြစ်နေသော ဆန်အိတ်ပုံကြီး၏ နောက်ဖက် ကြမ်းပြင်တွင်ချထားသော ဆန်အိတ်နှစ်လုံးကြားတွင် လိုးနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ မစိန်အေး၏ ပေါင်ကြီးတွေက ဖွေးဖွေးနုနုနှင့် ကြီးမားလှသည်။. ဖင်သားကြီးများက ဘေးသို့ကားထွက်နေသည်။ ကိုတုတ်ကြီးဆောင့်လိုးချလိုက်တိုင်း အိခနဲ အိခနဲ ပြားချပ်သွားသည်။ မစိန်အေး၏ စအိုဝလေးမှာ ရွဲ့သွားလိုက် ပြဲခနဲ ဖြစ်သွားလိုက်ဖြင့် လှုပ်ရှားနေသည်။ ကြီးမားဖောင်းအိနေသော စောက်ဖုတ်ခုံးခုံးကြီး ပိပြားသွားသည်အထိ ကိုတတ်ုကြီးက သူ့လီးကြီးကို အဆုံးအဆုံးထိ လိုးသွင်းနေသည်။
မစိန်အေးက ပါးစပ်ကိုစေ့၍ ကိုတုတ်ကြီးဆောင့်ချလိုက်တိုင်း အီးခနဲ အော်သည်။ ကိုတုတ်ကြီးဆိုတဲ့လူကလည်း မိန်းမ မရှိသော်လည်း မိန်းမပေါင်းစုံကို လိုးဖူးသူဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းကိုလည်း စံချိန်မှီ သန်မာစေရန် နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် အမြဲ သနေသူဖြစ်သည်။
ဟူ၍ ခံစားရခက်သည့် ညည်းညူသံမျိုးစုံ ထွက်နေ၏။ မစိန်အေး၏လက်နှစ်ဖက်က ဖင်ခုထိုင်ထားသော ဆန်အိတ်ဒေါင့်စွန်းနှစ်ဖက်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်ကိုင်ရင်း တစ်ကယိုလုံး ခါရမ်းနေသည်။ မာမာတစ်ယောက် သတိူု့နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ရင်း အာခေါင်တွေ ခြောက်ကပ်လာသည်။ လျှာလေးကိုထုတ်၍ နှုတ်ခမ်းလေးများကို ပွတ်သပ်ပေးနေရရုံမျှမက ခဏခဏလည်း တံတွေး မျိုချနေမိသည်။ ခဏအကြာတွင် ကာမဆိပ်က တက်လွန်းမက တက်လာပြီး ခုနေ လီးတစ်ချောင်း စောက်ပတ်ထဲ ထည့်လိုကသ်ည်နှင့် ရွှဲခနဲ ပြီးများသွားမလားတောင် မသိ ဟုတွေးနေမိသည်။ မခံစားနိုင်တော့လွန်း၍ မာမာ သူမ၏အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်၍ထားလိုက်ရသည်..။
ဆိုင်ထဲသို့ရောက်သည်နှင့် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို အောင်ကို သဘောပေါက်သွားသည်။ လူကသာ အသက်အစိတ်ပဲရှိသေးတာ.. အတွေ့အကြုံက ရှိသင့်သလောက် ရှိသည်။ ဂေါ်လီပင် နှစ်လုံးထည့်ထားသည်။ သူ့ရှေ့မှ ဖင်ပူးထောင်း ထောင်ကြည့်နေသော မာမာကို နောက်မှကြည့်ရင်း လီးတောင်လာကာ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာသည်။ တဖြေးဖြေး အနားသို့ တိုးသွားရင်း လက်တစ်ကမ်းအကွာအရောက်တွင် ရပ်လိုက်ပြီး ပုဆိုးလှန်လိုက်သည်။ ရှေ့မှ မာမာကို မထိရဲပြန်..။ ပြဿနာတက်လျှင် ခက်မည်..။ နေ့စဉ်တွေ့ကာ လီးတောင်နေရသည့် မာမာ၏ဖင်ကြီးက ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ထားတာ တွေ့လိုက်ရတော့ အောင်ကို အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းလာသည်။ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် လီးကိုကိုင်၍ အာသာဖြေရန် ဂွင်းတိုက်သည်။ တိုက်ရင်း တိုက်ရင်း ကာမဆိပ်တက်လာတော့ လူက ရဲလာသည်။ အောင်ကို ရှေ့သို့တိုးပြီး တုန်နေသော လက်ချောင်းများဖြင့် မာမာ့ထမီကို မတင်လိုက်သည်။ မာမာသိလိုက်သည်။ ကိုချိုကြီး ရောက်လာပြီး သူမဖြစ်နေပုံကို နောက်မှကြည့်၍ မနေနိုင်ဖြစ်လာပုံရသည်။ လှည့်ကြည့်၍ မဖြစ်..။ ဒီမှာကလည်း ခံစားနေရတာ အရည်ပျော်လုပြီ..။ လှည့်ကြည့်မှ မလုပ်ဖြစ်ဘဲဖြစ်သွားအုံးမည်..။ မာမာ မသိချင်ယောင်ဆောင်၍ နေလိုက်ပြီး သူမ၏တံတောင်ဆစ်လေးနှစ်ဖက်ကို အသာရုတ်ကာ ဆန်အိတ်ပေါ်တွင် ထောက်လိုက်ပြီး အားပြုလိုက်ကာ ကိုယ်ကို တောင့်ထားလိုက်သည်။ ထဘီက ခါးပေါ်ကိုလန်တက်သွားတော့ ဖွေးအိနေသေ ဖင်ကြီးနှစ်လုံးကြားမှ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများက ခပ်စူစူလေး နောက်သို့ထွက်နေသည်။ ကြည့်ရင်း လီးက တဆတဆ်တ် ဖြစ်သွားပြီး .. အေ၇ထွက်ချင်သလို ဖြစ်သွားရသည်။ အချိန်ဆိုင်းမနေတော့ဘဲ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဟု သဘောထားကာ မာမာ၏ခါးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် အသာထိန်းကိုင်ကာ လီးကို ဆတ်ခနဲ ထိုးသွင်းလိုက်တော့သည်။ မတရားဖြစ်နေသော အရေများကြောင့် လီးက လျှောခနဲဖြစ်ကာ ကျဉ်းကျဉ်းကြပ်ကြပ်ကြားမှ တဆုံး တိုးဝင်သွားသည်။ အောင်ကို၏လီးရင်း ဆီးခုံနှင့် မာမာ၏စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းတို့ ထိရိုက်မိချိန်တွင် အ..ဟူသော ရှတတအသံလေးဖြင့် မာမာ၏ခေါင်းလေး ထောင်သွားသည်။ အခြေအနေကို ချက်ချင်းသိသွားသော အောင်ကိုက မာမာ၏တင်သားကြီးနှစ်ဖက်ကို အားပါးတရ ဆုတ်ကိုင်ကာ တစ်ချက်ချင်း စီးစီးပိုင်ပိုင် အားဖြင့် ဆောင့်လိုးသည်။ အံမယ်.. သူကလည်း မခေပါလား..။ ဆောင့်ချက်နှင့်အညီ ဖင်ကြီးတွေကို နောက်သို့ဆောင့်၍ တောင့်၍ ကော့ပေးနေသည်။ မာမာအကြိုက် တွေ့သွားသည်။ သူမစိတ်ကြိုက် လီးကို အခုမှတွေ့ရပြီဟု တွေးမိသည်။ လီးကလည်း မာလိုက်သည်မှာ မပြောနှင့်တော့…။ သံချောင်းအလားပင်..။ အရှည်ကလည်း ဆောင့်တိုင်းဆောင့်တိုင်း သားအိမ်ဝကို ထိသည်။ လုံးပတ်ကလည်း သူမစောက်ခေါင်းနှင့် ဆိုလျှင် ဓါးအိမ်ထဲ ဓါးထိုးစွပ်ထားသလို ကွက်တိဖြစ်နေသည်။ ပြီးတော့..လီးကြီးက ပူနွေးနွေးကြီး…။ နောက်သို့ကော့ပေးရုံမျှမက အံကြိတ်၍ သူမ၏စောက်ခေါင်းထဲမှ လီးကို ညှစ်ညှစ်ပေးသည်။ အလိုးခံရင်းမှ နို့တွေ အကိုင်ခံချင်လာသည်။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ ဘာမှ
မတတ်နိုင်သေး..။ နောက်က ဆောင့်အားက တအားသွက်၍ တအားပြင်းလာသည်။ ပြီးချင်လာပုံရသည်။ မာမာလည်း စိတ်ကိုလျှော့ကာ အထွတ်အထိပ်ရောက်ရေးအတွက် စိတ်ကို နှစ်ထားလိုက်သည်။ ဂေါ်လီက လီးတန်အပေါ်တစ်လုံး ၊ အောက်ဖက်မှာတစ်လုံးဖြစ်၍ ခုလို ဖင်ကုန်း၍လိုးခံ၇ချိန်တွင် လီးအောက်ဖက် ဂေါ်လီက စောက်စေ့ကို ဖိဖိသိပ်နေသည်။ တင်းကနဲ တင်းခနဲဖြစ်ရင်း မာမာ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်တုန်ရင်ရင် ဖြစ်လာသည်။ ခဏအတွင်းမှာပင် လီးက တဆုံးဆောင့်သွင်းလိုက်ရင်း စောက်ခေါင်းထဲတွင် ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ ရုန်းကာ သုတ်ရေများ ပန်းထုတ်လိုက်သည်။ ပြင်းလိုက်သည့်အရှိန်..။ နွေးလိုက်သည့် လရေတွေ..။ အ…ခနဲ ..အ..ခနဲ ဖြစ်သွားရင်း လီးကြီးကို စောက်ခေါင်းဖြင့် ဆုတ်ဆုတ်ဆွဲကာ မာမာတစ်ကိုယ်လုံး ရမ်းခါ၍ ပြီးသွားရတော့သည်။ ခဏနေပြီး နောက်ကလူက လီးကိုဆွဲထုတ်သည်။ လူကို အချောင်ဝင်လိုးပြီး ပြေးတော့မည်..။ ဒီလိုလူမျိုးက ဇာတ်လမ်းမရှည်တတ်ကြ..။ မာမာကောင်းကောင်းသိသည်။ ဒါမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်…။ သူ့ လီးအကျွတ်မှာပင် မာမာက ဆတ်ခနဲလှည့်ကာ လက်ကို ဖမ်းဆွဲသည်။
သူမထင်ထားသလို သူဌေး ကိုချိုကြီး မဟုတ်။ တစ်နေကုန် ဆိုက်ကားပေါ်တွင် ထိုင်ကာ ငိုက်နေတတ်သည်ကို နေ့တိုင်းတွေ့နေရသည့်သူ…။ မာမာ နာမည် မသိ..။ လူက အဓိက မဟုတ်..။ လီးက အဓိက…။ သူ မလုပ်ကျွေးချင်လည်း လုပ်ကျွေးပါရစေ..။ ဒါက မိန်းမတိုင်း၏စိတ်..။
လက်ကလှိုမ်းအဆွဲခံလိုက်ရတော့ အောင်ကို လန့်သွားသည်။ ဒီလောက်နှင့် ဇာတ်လမ်းအပြတ်မခံနိုင်သော မာမာကလည်း သူမ၏ထဘီအောက်နားစလေးဖြင့် အောင်ကို့လီးကြီးကို တယုတယလေး သုတ်ပေးသည်။ ပြီးတော့ အောင်ကို့မျက်နှာကို တည့်တည့်ကြည့်၍ ပြုံးပြလိုက်ပြီး ချက်ချင်း ရှက်စနိုးပုံစံဖြင့် ခေါင်းကို ငုံ့လိုကက်ာ အောင်ကို့ ကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ သူမ၏ရှေ့မှ လှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်ဖြင့် မသွားချင်သွားချင် ထွက်သွားသော အောင်ကိုတစ်ယောက် မနက်ကျရင် လမ်းထိပ်မှ လာပြီး စောင့်နေမှာ သေချာကြောင်း မာမာ တွေးလိုက်မိတော့သည်..။
အောင်ကိုက ရှေ့ကအထွက် မာမာက သူ့နောက်နားက ခွာ၍ထွက်သည်။ အောင်ကို ကွမ်းယာဆိုင်ပေါ်သို့ တက်လကိုချိန်တွင် မာမာက မှောင်ရိပ်ထဲမှနေ၍ လမ်းတစ်ဖက်ခြမ်းရှိ ကားဂိတ်ရှိရာသို့ လျှောက်သွားနေပြီ…။ ကွမ်းယာဆိုင်သို့ အောင်ကို ပြန်ရောက်ပြီးသည်အထိ ထွေးကြည်က ပေါ်မလာသေး..။ အောင်ကိုမှာလည်း ချောချောလှလှ ပစ္စည်းကောင်းကောင်းကြီးကို လိုးလိုက်ရတာမှန်သည်။ ဒါပေမယ့် ကသတ်ုကယက်ဖြင့် လိုးလိုက်ရ၍ အားမရ..။ နောက်နေ့တွေမှာ ကြုလာံနိုင်သော်လည်း လောလောဆယ်တွင် အောင်ကို၏လီးက အားမရသေး၍ တောင်မတ်နေဆဲ..။ စိတ်ထဲကလည်း မကျေနပ်ချင်သေးပေ..။
ခဏနေတော့ ထွေးကြည်ပြန်ရောက်လာသည်။ အောင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ ထွေးကြည်တစ်ယောက် အမူအယာတွေ ပျက်ပြီး မျက်နှာတစ်ခုလုံးလည်း နီရဲကာ ထူအမ်းအမ်း ဖြစ်နေသည်။ အောင်ကို သဘောပေါက် လိုက်ပြီ..။ ထွေးကြည်ကို ကြည့်ရင်း အောင်ကို၏လီးက တဆတ်ဆတ် ဖြစ်လာပြန်သည်။
“ အော်… အောင်ကို…ဆိုင်သိမ်းတော့မယ်ဟာ… ငါ့ကို လိုက်ပို့….”
အသံက အာခေါင်ခြောက်သံနှင့် အက်တက်တက် ဖြစ်နေသည်။ ထွေးကြည် ပြန်အလာလမ်းတွင် ကိုချိုကြီး၏ ဘင်ကားလေးကို တွေ့ရသည်။ ကားပေါ်တွင် အိ ဆိုသော ကေင်မလေးနှင့် အိ၏ မိဘများ ၊ အဒေါ်များ မိသားစုကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် ထွေးကြည်၏စိတ်ထဲ ဒီတစ်ခါတော့ ကိုချိုကြီး တစ်ယောက် ကောင်မလေးကို အတည်ကြံတာဘဲဟု သေချာပေါက် တွေးသည်။ ထွေးကြည်နှင့် အောင်ကိုတို့ အ.ထ.က ကျောင်းဝန်းအရှေ့ ရောက်လာသည်။ ကျောင်းဝန်းထဲတွင် လူတစ်ရပ်သာသာ ကံ့ကော်ပင်များ ရှိနေသည်။
“ အောင်ကို ….ရပ်အုံးဟာ… ငါ ကံ့ကော်ညွန့် ခူးလိုက်အုံးမယ်…”
ဆိုက်ကားကို ရပ်၍ ထွေးကြည်၏နောက်သို့ အောင်ကိုပါ လကိုသွားသည်။ ခဏအကြာတွင် ..
“ အောင်ကိုရေ… လုပ်ပါအုံးဟ… ငါ့အင်္ကျီထဲ ဘာကောင် ဝင်သွားလဲ မသိဘူး…”
ခပ်အုပ်အုပ်ပြောရင်း ထွေးကြည်က သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်မှာဝတ်ထားသော ခပ်နွမ်းနွမ်း တီရှပ်ကို ခေါင်းပေါ်မှလှမ်၍ ချွတ်လိုက်သည်။ အသားဖြူသူမို့ ဝတ်ထားသော ဘော်လီအောက်မှ ရုန်းကန်ထွက်တော့မယောင် နို့အုံကြီးတွေက ဖြူဖွေးနုဖတ်၍ နေသည်။ အောင်ကိုက မျက်နှာချင်းဆိုင် ရပ်လိုက်ပြီး ဘာမပြောညာမပြောနှင့် ဘော်လီအင်္ကျီကို ဆွဲလှန်ကာ လက်တစ်ဖက်နှင့် သူမခါးကို ဖက်လိုက်ရင်း နို့တစ်လုံးကို ဖိ၍စို့ပစ်လိုက်သည်။
“ ဟဲ့….အို….အောင်ကို….. မ…မလုပ် နဲ့……အို…..အို…..”
မလုပ်နဲ့ဟုသာ ပြောသည်။ ထွေးကြည်က သူမ၏ ရင်ဘတက်ို အောင်ကို၏ပါးစပ်ထဲသို့ အတင်းဖိကပ်ပေးနေသည်။ အောင်ကိုက နို့ကြီးတွေကို လက်ဖြင့် ဆွဲပြီး တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး အားရပါးရစို့သည်။ ထွေးကြည် မျက်စေ့စုံမှိတ်၍ တအင့်အင်း ဖြစ်နေသည်။ အောင်ကို၏လက်များက သူမ၏ခါးမှနေ၍ အောက်သို့လျှောကျလာကာ တင်ပါးဆုံ လုံးလုံးကြီးတွေကို အားပါးတရ ဆုတ်နယ် သည်။ ဒူးတွေတုန်ကာ ညွှတ်ကျလာသော ထွေးကြည်ကို ပွေ့၍ အောက်က မြက်ခင်းပေါ်သို့ ပက်လက်လှန်ချလိုက်တော့ ကျောနှင့် မြက်ခင်း မထိခင်မှာပင် ထွေးကြည်က သူမ၏ဘော်လီအင်္ကျီကို
ချွတ်ပေးလိုက်တော့သည်။ မြက်ခင်းပေါ်သို့ လှဲမိတော့ အောင်ကိုက သူမ၏ထဘကီို ဆွဲလှန်လိုက်သောအခါ ထွေးကြည်က မျက်နှာလေးတစ်ဖက်သို့လှည့်လိုက်ရင်း ဒူးနှစ်လုံးထောင်ကာ ပေါင်တွေကို ခပ်ဟဟ ကားပေးထားလိုက်သည်။
အောင်ကို ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး သူမ၏ပေါင်နှစ်လုံးကို ဖြဲကာ ဒူးထောက်ဝင်လိုက်ပြီး တဆတ်ဆတ် ဖြစ်နေသော သူ့လီးကြီးကို အတေ့ ထွေးကြည်က သူမ၏စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို ဗိုက်ကြောတင်းရုံမျှ ကော့တင်ပေးလိုက်သည်။
လီးက တဆုံးဝင်သွားပြီ..။ ထွေးကြည် ညည်းသည်။ နာ၍မဟုတ်..။ ကောင်း၍ဖြစ်ကြောင်း အောင်ကို နားလည်သည်။ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် နို့နှစ်လုံးကို ဆွဲညှစ်၍ ကိုင်ကာ တုံ့ဆိုင်းမနေတော့ဘဲ ဆောင့်လိုးသည်။
နဂိုထဲက အရည်တွေ ရွှဲနေပြီးမို့ လီးဝင်သွားသံ တပြွတ်ပြွတ်…ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထွေးကြည်က မျကလ်ုံးစုံမှိတ်ပြီး သူမ၏လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် နို့တွေဆွဲကိုင်ထားသော အောင်ကို၏ လက်နှစ်ဖက်ပေါ်ကို တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးကို လုံးခနဲ လုံးခနဲ ကော့ ကော့တင်၍ အားပါးတရ အလိုးခံသည်။
“ ပြွတ်….ဒုတ်….ဘွတ်….စွပ်…အ….ဟင်းဟင်း…ဗြစ်…ကျွတ်..ကျွတ်… အမလေး.. နော်…..ဟင့်..ဟင့်…… အ…….အ………”
ထွေးကြည် အသံမျိုးစုံထွက်၍ ယောက်ယက်ခတ်နေသည်။ သူတို့ လိုးနေကြတာက ကျောင်းအုတ်နံရံအတွင်းဖက်မှာမို့ လူမမြင်နိုင်၍ လွတ်လပ်နေသည်။
“ လုပ်…လုပ်….နာနာလေး လုပ်စမ်းပါ…အင်း ဟင်း….ဗြစ်….ပြွတ်…..စွပ်…ဖွတ်..ဒုတ်…..အီး…..အ…..အ…”
မခံရတာကြာလို့လား မသိ…၊ ထွေးကြည် ပြီးချင်လာသည်။ အောင်ကို၏ လီးပေါ်မှ ဂေါ်လီတွေကလည်း ထွေးကြည်၏ စောက်စေ့ပြူးပြူးကြီးကို ဖိသိပ်နေသည်။
ထွေးကြည် အောင်ကိုအား ဆွဲယူ၍ သိမ်းကြုံးဖက်လိုက်ရင်း ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ
ကော့ကော့တက်သွားတော့သည်။ စောစောက မာမာအားလိုး၍ တစ်ချီပြီးထားသော အောင်ကိုက မပြီးသေး…။ ဆက်ရအုံးမည်..။ မှိန်းနေပြီးမှ ထွေးကြည်က မျက်လုံးလေး နှစ်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီး အရည်လဲ့နေသော မျက်လုံးလေးများဖြင့် …
“ အောင်ကိုရယ်….ကောင်းလိုက်တာဟယ်… ငါ့ကို ပစ်မထားပါနဲ့ နော်….”
ဟူသော အသံရှတတလေး က လှိုက်မောစွာ ထွက်ပေါ်လာပါလေတော့သတည်း…။
မို့ မို့ ထွန်း